Xildhibaan Mahad Dhoorre “Muusiibo ayey aheyd wixii shalay ka dhacay Lafoole, dad maras ah ayaa la-laayay” – Kalfadhi
Xildhibaan Mahad Dhoorre “Muusiibo ayey aheyd wixii shalay ka dhacay Lafoole, dad maras ah ayaa la-laayay”
Xildhibaan Mahad Cabdi Dhoorre oo katirsan Baarlamaanka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lahadlay Kalfadhi ayaa Cambaareeyay falkii Shalay lagu laayey dadkii shacabka ahaa ee ku sugnaa degaanka Lafoole ee duleedka magaalada Muqdisho. Xildhibaanka ayaa sheegay in wixii shalay ka dhacay Lafoole ay ahaayeen Xasuuq lagu laayey dad badan oo maras ah oo aan wax dembi ah galin.
“Aad-baan uga xumahay wixii shalay ka dhacay Lafoole, Xasuuq ayuu ahaa, waana Cambaareynayaa”, ayuu yiri Xildhibaan Mahad Dhoorre oo katirsan Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya. “Haween iyo Rag oo waddo nadiifinaya dadkii dilay waxay na tusayaan in aysan bini-aadam aheyn, diin lahayn ee waa in qof kasta oo Soomaaliyeed ka hortagaa ragaan, waa kaankaro”, ayuu yiri Xildhibaan Mahad Dhorre.
“Waxaan baareynaa sababta dadkaas loo shaqa geliyay iyadoo aan Ilaalo la socon, waa dayac waxaana loo baahan yahay qof qaata Mas’uuliyadda dadkii lagu laayey Lafoole”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaankaan katirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dhibaatooyinka ka jira Wadda Xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayuu aad uga hadlay Xildhibaan Mahad Dhoorre oo sidaan oo kale hore uga hadlay dadkii shacabka ahaa ee lagu dilay degaanka Lafoole ee duleedka Muqdisho bishii hore kuwaas oo ahaa dhuxuleey islamarkaana la gubay Gawaaridii ay saarnaayeen.
“Wadada Muqdisho iyo Afgooye, dhibkeeda waa nagu soo laa-laabtay dad badan ayaana lagu dilay waxaan ugu baaqaynaa Koonfur Galbeed iyo Dowladda dhexe in ay wax ka qabtaan dhibaatada ka jirta Wadadaasi”, ayuu yiri Mahad Dhoorre oo la hadlay Kalfadhi.
Inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye ayaa noqday degaano halis ah oo ay ka dhacaan dilal, qaraxyo iyo dagaalo toos ah. Hore ayaa waddaasi waxaa uga go’ay Mas’uuliyiinta Dowladda Soomaaliya iyo Kuwa Maamulka Koonfur Galbeed iyo Ciidamada Dowladda, waxaana hada muuqata in lagu laaynayo dadkii shacabka ahaa ee aaggaasi ku sugnaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay baarayaan dadkii falkaan ka dambeeyay ayna cadaaladda hor keeni doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Genral Cabdullaahi Xasan Bariise oo u hadlay Booliiska Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in dadka falkaan ka dambeeyo ay katirsanayihiin Al-shabaab laguna raad joogo. Waxa uu sheegay in dhowaan ay Ciidamada Booliiska Soomaaliya soo qaban doonaan dadkii geestay falkaan foosha-xun ee ka dhacay degaanka Lafoole ee duleedka Muqdisho.
Wasaarada arrimaha gudaha Punland oo mudaysay wakhtiga doorasahada golaha deegaanka Gaalkacyo
Xildhibaan Mahad Salaad "Gabar Saqiir ah inla kufsado, la dilo, waa wax islaamnimada iyo dhaqankeena suuban ka baxsan"